KENYA maku guuleysan kartaa iney maamul ka madax banaan Muqdisho ka dhisto Kismaayo? WARBIXIN XIISO LEH | Qaranimo Online
KENYA maku guuleysan kartaa iney maamul ka madax banaan Muqdisho ka dhisto Kismaayo? WARBIXIN XIISO LEH
October 18, 2012 | Filed under: Warka Maanta | Posted by: Ayaanle Jubbooyinku waxey la mid yihiin kuna qaab yihiin marka dhinac kasta laga eego gobollada kale ee Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Mana dhicin 22 dii sano ee qaska iyo jaah wareerku sida gaarkaa uga jirey bartamaha iyo koofurta dalka iney Jubbooyinku qaadeen waddo gooniya oo ay uga baddalanyihiin laga soo billaabo Koofurta G/Kacyo ilaa Dhoobley.
Bartamaha iyo Koofurta Soomaaliya Muqdisho ayaa saameyn ku leh
Muqdisho mushkiladdeedu ma ahan sida dadka qaar ay u dhigayaan oo ah in dadka joogaa xunyihiin oo aysan maamul aqoon oo bahallo yihiin! Hadalkaasi ma ahan hadal cilmi ku dhisane waa iska ceytan iyo caraatan aan macno sameyneyn.
Xaqiiqduse waxey tahey mushkiladda Muqdisho waxey aheyd mushkiladda qaranka Soomaaliyeed. Haddii xal loo helo qaranka soomaaliyeed Muqdisho xal waa loo heley. Haddii Soomaaliya xal loo waayana xalkeedu wuu maqnaanayaa, ilaa laga gaarayo heer laga quusto qarannimada oo gobol kastaa iskiis isku taagayo! Markey sidaasi dhacdo Muqdisho iyadoo uusan saarneyn culeyska qarannimo way ku qasbantahey iney yeelato maamul degaan iyada iyo intii kalee ay is raaci karaan u gaar ah.
Muqdishana waxaa taas kala mid ah gobollada ay gaari karto saameynteedu oo joqoraafi ahaan ay isku xiranyihiin.taariikhda dheer ee 22 dii sano ee lasoo dhaafeyna waxey na tusineysaa iney Kismaayo ka mid tahey gobollada Muqdisho centerka u tahey oo ay isku aayaha yihiin kharaar iyo macaanba.
Maxey jubbooyinku uga baddalanyihiin Somaliland iyo Puntland?
Dhinaca kale markaan eegnana waxaan arkeynaa iney sameysmeen labo maamul oo midna uu madax bannaani ku dhawaaqey, midna la mid yahey wax madax bannaan. Labadaasi maamulna waa Somaliland iyo Puntland.
Haddaba su,aashu waxey tahey maxaa Jubbooyinku uga baddalanyihiin Puntland iyo Somaliland oo intaasoo sano u diiddanaa iney yeelato maamul madax bannaan, oo haddeysan hore u yeelanna hadda u diidaya?
Qodobka ugu muhimsan oo inta kaloo dhan qarinaya sidaan hore usoo sheegey waa in labadaas maamul ee hir galey ay ka fogyihiin caasimadda Muqdisho, heer aysan saameyn ku yeelan karin. Muqdishana sidaan hore usoo xusey mushkiladdeedu ma ahan maamul deegaane waa mushkilad heer qaran ah. Qaranka Muqdisho caasimadda u tahey xalkiisa hal reer oo Muqdisho u badan ma keeni karaan kaligood. Laakiin qeyb muhim ah ayey ka noqon karaan.
Somaliland arrinteeda dhinac ayaan iska dhigeynaa in kastoo ay wax badan oo tilmaamaa la wadaagto Puntland. Laakiin maadaama labo tilmaamood oo gooni ka dhigaya ay jiraan gees ayaan ayaan iskaga riixeynaa.
Maxey ku kala baddalanyihiin Puntland iyo Jubbooyinku?
Waxaan tilmaameynaa waxyaabaha kale ee Puntland iyo Jubbooyinku ku kala baddalanyihiin, oo aysan Jubbooyinku ugu dayan kareyn Puntland.
1.Ka fogaanshaha Puntland ay ka fogtahey caasimadda Muqdisho iyo saameynteeda.
2. Puntland waa qabiil soocan oo isku heyb ah ee deegaan kaliya ma ahan. Degaan ahaan haddey tahey waxa lagu dhisey Koofurta G/Kacyo,Hobyo iyo Xarardheere intey bannaanka ka ahaadaan Sool iyo Sanaag iyo Togdheer qeybo ka mid ah kama mid ahaadeen. Marka waxaa lagu dhisey Puntland heshiis dhalasho qabiil ku saleysan.
3. Puntland ciidan shisheeye xooggiis kuma dhismini dadka degaanka rabitaankoodey ku dhisantahey. Xataa dadka ay heybta kore wadaagaan oon dooneyn iney ka mid noqdaan waa laga tegey sida Caabud Waaq iyo Balanbal oo kale.
4. Dowlad dhisan oo la aqoonsanyahey ma jirin markey dhismeysey Puntland.
Saameynta Muqdisho iyo Kismaayo isku leeyihiin
Sida iska cad oon qarsooneyn inta badan Kismaayo ma yeelan maamul ka madax bannaan Muqdisho.
Waxey magaaladaasi isku baddashey gacmo badan oo intooda badan ay Muqdisho qeyb ka aheyd. Inta gacan ku heynteeda ay Muqdisho ka madax bannaaneyd ayaa ka yareyd inta kale.
Is Baheysigii SNA ee Caydiid Iyo Axmed Cumar Jees
Isbaheysigii Dooxada Jubba ee Barre Hiiraale iyo Seeraar.
Isbaheysigii Maxkamadaha ee Sh.Shariif iyo Sh.Xasan Turki iyo kooxo kale
Isbaheysigii Shabaab oo cid walbaa ku jirtey oo isku xirnaa min Gobollada Dhexe ilaa Dhoobleey.
Gurmadkii Xasan Turki kasoo direy Jubbooyinka qeyb ayuu ka ahaa jebintii qabqableyaasha. Gurmadkii Muqdisho ka baxeyna labadii goor oo Kismaayo laga qabsadey Isbaheysigii Barre Hiiraale qeyb ayuu ka ahaa.
Markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf hoggaaminayey iyo tii Sh.Shariif hoggaaminayey lagu hareereynayey Villa Somaliya ciidanka iyo saadka iyo tababarkuba Jubbooyinka ayuu ka imaanayey.
Dadkaas go,doominta Villa Somaliya Jubbooyinka uga yimidna waxaa ka mid ahaa Sh.Axmed Madoobe iyo Sh.Xasan Turki.
Isbaheysigaan hadda Shabaab Kismaayo looga saareyna sharciyaddiisa iyo magaciisuba Muqdishey taallaa oo waa magac dowladeede ma ahan magac qabiil ama wax kale.
Halkaas waxaa ka cad iney labadaas magaalo yihiin labo magaalo oo isku masiir ah oon la kala jari kareyn, ilaa Muqdisho ka quusaneyso kaalinteeda caasimadnimo.
Maxaa u suurto gelin kara iney Kenya Kismaayo ka jarto Muqdisho?
Kenya way isku deyi kartaa iney maamul gooniya u sameyso Jubbooyinka. Laakiin iney ku guuleysato iyo iney ku guul darreysato waa mid ku xiran arrimo kale oo badan oo iyaguna saameyn tooda leh oo wejiga arrinta wax ka baddali kara. Arrimahaasna waxaa ka mid ah:
1. iney sii jirto Xarakada Al Shabaab oo ay u dhaxeyso degaannada dowladda Muqdisho fadhida ka taliso iyo maamulka Kenya ka dhiseyso Kismaayo.
2.Waxaa kaloo iyaduna aan weli la saadaalin karin sida uu noqon doono Maamulka Baay iyo Bakool oo hadda Itoobiya heysato iyo inuu noqon doono mid dowladda dhexe si toos ah u hoos yimaada iyo in kale. Haddey Itoobiyana ka abaabusho halkaas maamul kale oo Muqdisho ka madax bannaan, sida kuwa Kismaayo ayey iyaguna soo dhaweynayaan qabaa,ilkaasi. Laakiin su,aashu waxey tahey ma dooneysaa Itoobiya iney sidaas sameyso? Waa arrin iyada u taalla oo la ogaan doono maalmaha iyo bilaha soo socda. Ilaa hadda kama muuqato Itoobiya rabitaan ku aaddan iney dowladda dhexe ku qabsaneyso maamul u sameynta gobollada ay heysato sida Kenya ka muuqata.
3. Iney dowladdu noqon doonto dowlad xoog leh oo gacanteeda soo gelisa degaannada kale oo dhan iyo iney noqoto mid daciif ah oo shisheeye uun ku tiirsan.
Haddey saddexdaas qodob meesha ka baxaan oo dowladda ay gacanteeda soo galaan dhammaan gobollada kale oo ay Kenya kaliya iyo maamul ay ka dhistey Jubbooyinka ay noqoto, shaki waxaan laheyn iney Kenya ku qasbanaaneyso iney baxdo, jubbooyinkana u deyso dowladda soomaaliyeed.
Haddeyse is caawiyaan Shabaab,Itoobiya iyo Kenya oo maamullo ka madax bannaan Muqdisho ay kasii jiraan degaannada kale, markaas Jubbooyinku waxey noqonayaan gobollo fog oo aysan dowladdu gaariba karin. Dowladduna markaas waxey weyneysaa macnaheeda dowladnimo oo iyada iyo maammullada kale ee dalka kula loollamayaa isku mid ayey noqonayaan. Waxaana meesha ka maqnaan doona dowlad soomaaliyeed oo dalkoo dhan dowlad u ah.
Other Interesting posts:Ciyaar Boroordiiq ah oo lagu Xusayey Halyaayadii I...Wadfi uu hogaaminayo duqa Muqdisho oo u amba baxay...Wareysi Musharax Eng: Abdirahman Maxamed Macalin (...Zamzam oo kaalinta 7aad ka gashay orodka 400m Olim...Madaxweynaha ka hadlay shaqada guddiga farsamada i...Liiska Xildhibaanada cusub ee BaarlamaankaCiida Soonfur iyo Dabaaldegga MuqdishoQaybtii 11aad ee qisadii: ”Ila OOY!!!” Wareysi VOA: Shariif Xasan iyo C/weli Gaas doorash...Minneapolis' Somali experience may hold lessons fo...Wasiirka Maaliyadda, Qorshaynta iyo Iskaashiga Caa...AMISOM Meeting with the Somali Diaspora in North A...Socialize	Posted by Ayaanle on October 18, 2012. Filed under Warka Maanta.